Shikhar Post » रैराङ हाइड्रोको आइपिओ खुल्यो,कहाँ र कति गर्ने आवेदन ?
रैराङ हाइड्रोको आइपिओ खुल्यो,कहाँ र कति गर्ने आवेदन ?
रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (RAIRANG) को ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको आइपिओ बिक्रीमा आएको छ । कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई सहित ८ लाख ४० हजार कित्ता आइपिओ निष्काशन गरेको हो ।
कम्पनीको सेयर बिक्री तथा निष्काशनका लागि एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडका अनुसार ८ लाख ४० हजार कित्ता सेयरमध्ये ३३ हजार ६ सय कित्ता संस्थाका कर्मचारी र ४२ हजार कित्ता सामूहिक लगानीकोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ । सर्वसाधारणले ७ लाख ६४ हजार ४ सय कित्ता सेयरका लागि आवेदन गर्न पाउनेछन् ।
आइपिओमा वैशाख ३१ गतेदेखि छिटोमा जेठ ३ गतेसम्म र ढिलोमा जेठ २९ गतेसम्म आवेदन गर्न पाईनेछ । लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० कित्ता अर्थात ५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ४ हजार २ सय कित्ता अर्थात चार लाख २० हजार रुपैयाँसम्मको आवेदन दिन पाउने एनआइबिएल एस क्यापिटलले जनाएको छ ।
लगानीकर्ताले एनआइबिएल एस क्यापिटल लाजिम्पाट, रैराङ हाइड्रो डेभलपमेन्ट प्रालि थापाथली र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आस्वा सेवामा सहभागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सि आश्वा मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै मेरो शेयरका प्रयोगकर्ताले घरमै बसी इन्टरनेटको माध्यमबाट आइपिओमा आवेदन गर्न सक्नेछन् ।
कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको आइपिओलाई इक्रा नेपालले ग्रेड फोर रेटिङ दिएको छ । यसको मतलब तुलनात्मक रुपमा कम्पनीको आइपिओ औषत भन्दा कमजोर रहेको छ ।
यसअघि कम्पनीले गत जेठमा आयोजना प्रभावित पाँचथर र ताप्लेजुङका स्थानीयबासीका लागि ५ लाख ६० हजार कित्ता आइपीओ जारी गरेर बाँडफाँड समेत गरिसकेको छ ।
हाल कम्पनीको जारी पुँजी ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्व ७५ प्रतिशत रहेको छ ।
रैराङले पाँचथर र ताप्लेजुङको सिमा क्षेत्रमा ९.९ मेगावाटको इवाखोला जलविद्युत आयोजना निमार्ण गरेको छ । इवाखोला जलविद्युत आयोजनामा २५ प्रतिशत बराबरको १४ लाख कित्ता सेयर रिडी हाइड्रोपावरको नाममा रहेको छ । रैराङ हाइड्रोपावरले यसअघि धादिङमा ५०० किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत्त उत्पादन गरेको छ ।